कुखुराको भालेले मालिकको ह’त्या गरेपछि कुखुरावि’रुद्ध मु’द्दा दायर हुँदै - Nepali in Australia
कुखुराको भालेले मालिकको ह’त्या गरेपछि कुखुरावि’रुद्ध मु’द्दा दायर हुँदै
September 21, 2021 autherLeaveaComment on कुखुराको भालेले मालिकको ह’त्या गरेपछि कुखुरावि’रुद्ध मु’द्दा दायर हुँदै
काठमाडौं- आज सम्म मानिससँग जोडीएका अ’पराध, प्रहरी तथा अ’दालतको बारेमा सुनेकै छौ । तर, एउटा कुखुराको भालेलाई आफ्नो मा’लिकको ज्यान लिएको अ’भियोगमा पक्राउ गर्ने भएको छ ।
वास्तवमा कुखुराले अ’न्जानमा गरेको गल्तीले मालिकको ज्यान गएको हो । कुखुरा नै मालिकको ह’त्या’रा भएको प्रहरीको आरोप छ ।घटना भारतको ते’लगंगाको हो । ल’थुनर गाउँमा भएको घटना पछि कुखुरालाई प्रहरीले अदालतमा पेश गर्ने जनाइएको छ ।
तर प्रहरीले भने भाले अ’पराधि भएपनि पक्राउ गर्ने बारेमा नसोचेको बताइरहेको छ । २२ फरबरीमा दुईटा भाले जु’धिरहेका थिए । सोही क्रममा एउटा आफ्नै भालेको खुट्टटामा बा’धिएको च’क्कुले मा’लिकको कम्मरको तल्लो भागमा चो’ट लागेको थियो ।च’क्कुको प्र’हारबाट घाइते भएका मालिकको उपचारको क्रममा नि’धन भएको हो ।
एक रिपोर्टको अनुसार ४५ वर्षीय था’नुगुल्ला स’तीशले प्राय भालेको खुट्टामा एक विशेष प्रकारको च’क्कु बा’धिदिएका हुन्थे । त्यसैक्रममा ग’ल्तीले कुखुराको भा’लेको च’क्कु स’तिश तिरै ते’र्सिएको थियो । च’क्कुले का’टेपछि उनको शरीरबाट धेरै र’गत ब’गेको थियो ।उनलाई अस्पताल ल’गिएपनि बा’चेनन् ।ते’लगंगामा कुखुराको ल’डा’ई गर्न प्र’तिवन्ध गरिएको छ । नि’षेध हुदाँहुँदै पनि केही मानिसहरु लु’केर भाले जु’धाई गर्दै आएका थिए । अब भा’लेलाई अदालतमा पेश गर्ने भ’निएको छ ।
बुटवलका मेयरलाई एक सटमा ढालेका युवा पक्राउ, यसकारण हानेका रहेछन मु,’क्का
ड्युटीमा टिकटक भिडियो बनाए कामबाट निकाल्ने सरकारको घोषणा (सहि वा गलत ?)
बुढो रुख चिर्ने क्रममा वर्षौ पुरानो कुकुरको कंकाल अड्कीएको देखियो
August 5, 2021 auther
कुबेतको धनाड्य सुल्तानकी श्रीमती र छोरीको प्या-स मेटाएर काठमाडौमा साढे तीन तले घर !
August 30, 2021 auther
सुनसान जंगलमा चेनमा ताल्चा लगाएर रुखमा बाँधे, निस्कन सकेनन्, २ वर्षपछि भेटियो कंकाल….
March 3, 2021 auther